Tag: ihe ngosi | Martech Zone
Tag: ihe na-egosi
Tọzdee, Disemba 8, 2016 Na Mọnde, Nọmba 7, 2017 Douglas Karr
N’izu a, m na-enyocha ihe ndị a na-azụta n’ihe anyị na-ekwu. M mgbe ibiaghachi si n'ichepụta saịtị, mgbe ọpụrụiche e-azụmahịa saịtị, retail outlets, na Amazon. Abụghị m naanị otu. N'ezie, 84% nke ndị na-azụ ahịa na-elele Amazon tupu ịzụ ahịa Gịnị bụ Webrooming Webrooming - mgbe onye ahịa na-aga ụlọ ahịa iji zụta ihe mgbe ọ nyochachara ngwaahịa ahụ n'ịntanetị. Gịnị bụ Showrooming Showrooming - mgbe a ahịa ịzụrụ online mgbe nyochachara t The infographic